मतपत्र नै १५ पेजको, उम्मेद्वार ८०० ! कसरी हाल्ने मत ?
Friday, 12 Oct, 2018 2:51 PM
२६ असोज, काबुल । आठ सयभन्दा बढी अनुहार छन् उम्मेदवारका । अनि मतपत्र १५ पृष्ठको । तर, मत दिने हो एकजनालाई । अब कसरी हाल्ने मत ?